desk	७ पुष २०७७, मंगलवार
रीना भट्ट – भनिन्छ जुन कुरा पनि बढि भयो भने त्यो महत्वहिन हुन्छ। चिनी जति गुलियो हुन्छ त्यो पनि धेरै खादा तितो हुन्छ। मानब जीवन मा जब कुनै पनि बस्तु धेरै हुन्छ त्यसको भाउ अबस्य घट्छ। राजनीति पनि त्यस्तै हो।
राजनीति मा चुनाव सबैभन्दा महत्वपूर्ण समारोह हो। मानौ चुनाव मा दुई जना मान्छे जनप्रतिनिधि हरू उम्मेदवार मा उठेका छन्। एक जना कडा किसिमका डाक्टर र अर्को मिठाई उत्पादन गर्ने राम्रो र मिठो बोलि भएका हलवाई।
कडा डाक्टर ले भन्छ जीवन जिउन धेरै मिठाई नखाउ, शरीर स्वस्थ राख्न सधै ब्यायाम गरौ, नगरेमा मोटो भै सुगर र प्रेसर रोग लाग्छ भन्दै जनता लाई सचेत गराउछ ।तर अर्को उमेदवार मिठाई हलवाई को मिठो बोलि ले तपाईँ हामी लाई सस्तो मा मिठाई खान छुट दिन्छ।
शारीरिक ब्यायाम आबश्यक छैन भन्दै अर्का उम्मेदवार डक्टर लाई यो डक्टर ले मिठाई होइन औषधि खा भन्छ, मिठो नखा भन्छ, म तपाई लाई मिठो खानु भन्छु, ब्यायाम नगर्नु भन्छु र आफु खुसी स्वतन्त्र जीबन जीउन भन्छु भन्दै प्रचार गर्छ। यस्तो ब्यबस्था मा हाम्रो जस्तो देशमा डक्टर होइन मिठाई पसले लाई सबैभन्दा बढि जनता ले रूचाएर भोट दिदै बहुमतले जिताउदै लोकतन्त्र को जीत भन्दै सिन्दुर जात्रा गर्छौ। यसलाई नै हामीले लोकतन्त्रको जित भन्छौ।
हाम्रो देश को लोकतन्त्र पनि यस्तै भै सकेको छ। यहाँ धेरै मिठाई बेच्ने हलवाई ले जित हासिल गरेर उपचार गर्ने डाक्टर लाई हराएको चुनाव साक्षी छ किनभने जनता” स्वस्थ “रहन भन्दा “स्वच्छन्द” रहन रूचाउछन। एकातर्फ स्वस्थ रहने बिकल्प हुन्छ भने अर्को तर्फ स्वच्छन्द रहने बिकल्प हुन्छ तर जनताले स्वस्थ भन्दा स्वच्छन्द रहने बिकल्प छान्छ यसबाट नै एउटा यस्तो ब्यबस्था को जन्म हुन्छ जसलाई लोकतन्त्र भनिन्छ। तर जब यो लोकतन्त्र आबश्यक भन्दा बढि लोकतान्त्रिक अथवा मिठो भयो भने” राष्ट् लाई नै सुगर रोगी बनाउँछ” ।.
यो उदाहरण मेरो होइन Greek का महान दार्शनिक सुकरातले यो भनेका हुन्।”लोकतन्त्र” को कुरा आउँदा यो भनाई अबस्य अगाडि आउँछ । २३०० बर्ष पहिले नै उनी भन्थे मान्छे चिनेर भोट दिनु एउटा कौशलता हो। त्यति कै लहलहैमा लागेर कसैलाई भोट दिनु हुन्न जबसम्म सहि मुद्दा र सहि नेता ‘को’ भन्ने जानकारी हुदैन तब सम्म भोट दिने अधिकार को प्रयोग गर्नु हुन्न ।मनलागि तवरले जहाँ भोट को प्रयोग हुन्छ त्यहाँ लोकतन्त्र मजबुत हुदै हुदैन। अरूको लहै लहैमा लागेर आखां चिम्लेर कसैलाई नेता मानेर भोट दिनु हुन्न।
जनताको मुढमा लोकतन्त्र को भबिष्य निर्धारण हुने ब्यबस्था आज हाम्रो जस्तो देशमा छ। आज हाम्रो जस्तो देशमा सबै पार्टी जनहितका लागि भन्दा पनि चुनाव को लागि “चुनावी मेसिन” बनेर बसेको छ। किनभने उनी हरु चुनाव लडन र चुनाव जित्न मात्र चाहन्छ। कुनै पनि नेताको सफलता उसले कति चोटि चुनाव जितेको र कति भोट प्राप्त गरेको मा आकलन गरिन्छ। जनता ले आज जुन नेता लाई चुनाव मा हरायो भोली फेरि उसको कर्तुत बिर्सिएर पुनः चुनाव मा जिताउनु नै लोकतान्त्रिक ब्यबस्था भै रहेको छ। तर बास्तबमा समझदारी सहित सच्चा मान्छेलाई भोट हाल्नु नै बास्तबिक लोकतन्त्र हो।
भोट हाल्ने अधिकार भएकाले यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि भोट को सहि प्रयोग कहाँ गर्ने? यदि हामीले यस्तो गरेनौ र लोकतन्त्र को नाम मा गरिने ठूला ठूला भाषण मा बिस्वास गर्दै भोट हाल्यौ भने त्यहाँ बाटै लोकतन्त्र माथि प्रहार सुरु हुन्छ। मुखको बोली लाई लोकतन्त्र भनेर नझुक्यौ। दार्शनिक सुकरातले देशको तुलना पानी जहाज संग गरेर आफ्ना सिष्यहरूलाई सोध्थे रे “तिमी तिम्रो जहाज को संचालन को जिम्मा अनुभवी driver लाई दिन चाहन्छौ कि जो कोही लाई? भनेर। उनका शिष्यले भन्थे एक अनुभबि लाई अबस्य हामी जहाज चलाउन भन्थ्यौ।
यो कुरालाई नै समाएर सुकरातले तर्क दिन्थे कि त्यसो भए किन तिमी एक अनुभबि शासकलाई देश चलाउने जिम्मेवारी दिन हिचकिचाहट गर्छौ??? आज हामी पनि यसको तुलना नेपाल राष्ट्र संग गर्दै किन हामी सय, पाँच सय, हजार मान्छे को भिडको कुरा सुन्दै भाषण बाजी गर्ने ब्यक्ती लाई देशको जिम्मेवारी दिन चाहन्छौ ? एक सक्क्षम अनुभव ब्यक्ती को जिम्मामा राष्ट्र सुम्पौ न। यस्तो मान्छे लाई जिम्मा दिउ जो प्रति हामी लाई पूर्ण रुपमा बिश्वास होस जसले देशको भबिष्य बनाउन कम्मर सकोस जसको लागि कडा भन्दा कडा कदम चाल्न साहसिक होस। तसर्थ लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र नेतृत्व को हातमा होइन हाम्रो हातमा हुन्छ।
जसलाई पहिचान गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता ले नै हाम्रो भबिष्य निर्धारण गर्छ। ब्यबस्था खराब हुदैन खराब हाम्रो आखां र हाम्रो सोच हो ।जसले गर्दा सजिलै सित असक्ष्यम मान्छे ले सत्ता कब्जा गर्दै बेतिथी श्रीजना गर्छ । तसर्थ लोकतन्त्रलाई अति ठूलो सबैकुरा प्राप्त हुने ब्यबस्था पनि नठानौ र अति नै काम नलाग्ने ब्यबस्था पनि नसौचौ। लोकतान्त्रिक ब्यबस्था प्रति संतुष्ट संसार मा कुनै पनि राष्ट्र को जनता छैनन् ।लोकतन्त्र लाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने हामी जनता नै हुन सक्छौ।. बिसौ शताब्दिको सम्म बिश्व मा सिर्फ ११ वटा लोकतान्त्रिक देश हरू थिए। आज पाच लाख जति आबादि भएको संसार को १६७ देश मध्ये ९६ देशले आफूलाई लोकतान्त्रिक देश भन्दछन।
२१ देशमा आज पनि कुनै न कुनै प्रकारको तानाशाही छ भने२८ देशमा तानाशाही +लोकतन्त्र रहेको मिश्रित शासन छ।अमेरिकी सर्बेक्षण ले के भन्छ भने सिर्फ २० वटा देशमा पूर्ण एवं उन्नत लोकतन्त्र पाइन्छ भने ५५वटा देश मा कमी भएको लोकतन्त्र अर्थात् frust democracy” निराश लोकतन्त्र “पाइन्छ। यो लोकतन्त्र भएको देशको सुचीमा बिश्वको सबै भन्दा पहिलो लोकतान्त्रिक देश संयुक्त राज्य अमेरिका र बिश्व को सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारत पनि पर्छ। यी दुवै देशका स्थिति निराश जनक भए पनि यहाँ लोकतन्त्र बाचेकै छ। लोकतन्त्र को बिपरित तानाशाही होइन र तानाशाही को बिपरित लोकतन्त्र पनि होइन। जुन देशमा तानाशाही थियो त्यहाँ जनता ले लोकतन्त्र ल्याएको पनि उदाहरण छ भने जुन देशमा लोकतन्त्र छ त्यहाँ का शासक तानाशाही भएर शासन गरेको पनि उदाहरण थुप्रै छन्।
अर्थात् निचोड मा भन्ने हो भने लोकतन्त्र राजनीतिको महासागर हो संसार को कुनै पनि देशले सहि रूपमा त्यो महासागरमा भौतारिदै लोकतन्त्र को बाटो तय गर्न सकिरहेको छैन। यो बाटो को तय सिर्फ जनता र सरकारको आपसीसहयोग, सम्बन्ध सहितको अथक प्रयास ले मात्र हुन्छ। आज बिश्व भर ९६ देश लोकतान्त्रिक छन् ता पनि ती देशका जनता लोकतन्त्र संग संतुष्ट छैनन्। अमेरिका र बेलायत जस्तो देशका ५०प्रतिशत जनता लोकतन्त्र संग संतुष्ट छैनन्। जसको मुख्य कारण लोकतन्त्र को नाममा दिइने स्वच्छन्दता ले मानिस लाई बढि आक्रामक, आन्दोलित र बिरोधी बनाएर लोकतन्त्र लाई बढि प्रयोग भएर गुलियो बाट अति गुलियो बनाइ अन्तमा तितो समेत बनाएको देखिएको छ।
तसर्थ लोकतन्त्रलाई तितो बन्न नदिन Greek का एकजना राजनेता ले भनेका थिए “लोकतन्त्र को कमजोरी लाई समाप्त पार्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपाय 100 प्रतिसत संबिघान को पालना गर्नु नै हो। देश को सम्पूर्ण राज्य संचालन सम्बन्धित प्रक्रिया संबिघान को पूर्ण पालना को आधारमा हुने हो भने निरङ्कुशता ले कतै टाउको उठाउन सक्दैन र लोकतन्त्र आफ्नो सहि स्वरूप मा सदा रहिरहन्छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख सबैले संबिघान को पूर्ण रुपमा पालना गर्ने हो भने लोकतन्त्र कहिल्यै मर्दैन”
रीना भट्ट राजनीति शास्त्र पाटन संयुक्त क्याम्पस